ရင္နာစရာညီမေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕အျဖစ္ကို စိတ္မေကာင္းစြာမွ်ေဝခဲ့တဲ့ ေဝဠဳေက်ာ္ – XB Media Myanmar
ပရဟိတမင္းသားတစ္လက္ျဖစ္တဲ့ ေဝဠဳေက်ာ္ကေတာ့ လိုအပ္ေနတဲ့ေနရာတိုင္းကို ေငြအား၊လူ အားနဲ႔ မေႏွးကူညီတတ္သူတစ္ေယာက္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြစတ င္ေတာ့လည္း တစ္တပ္တစ္အားအေနနဲ႔ အိမ္ေတာင္မျပန္ေတာ့ဘဲ ေဝဘာဂီအထူးကုေဆး႐ုံနဲ႔ Quarantine ဝင္မယ့္သူေတြ ႀကိဳပို႔ေရးတို႔ကို ကူညီေနသူတစ္ေယာက္ပါ။
Q ဝင္ေနခ်ိန္ မိခင္ျဖစ္သူ ကြယ္လြန္သြား လို႔ က်တဲ့မ်က္ရည္ေတြက ဝတ္ထားတဲ့ PPE ထဲမွာ ေပ်ာက္ဆုံးသြားရတယ္….မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ဖို႔ ႏိုင္ငံျခားမွာ ပင္ပင္ပန္းပန္းအလုပ္လုပ္ခဲ့ရတ ယ္… . အခ်ိန္မီျပန္လာခဲ့ေပမယ့္ Qတံတိုင္းကျခားလို႔ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ မိခင္နားမွာ မေနႏိုင္ခဲ့ ဘူး။ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ဘယ္လိုအင္အားေတြနဲ႔မ်ား ရင္ဆိုင္ခဲ့တာလဲ ညီမရယ္…
ကြၽန္ေတာ္ ဘဝတစ္ေကြ႕မွာ က်င္လည္ ႐ိုက္ကူးခဲ့ရတဲ့ ႐ုပ္ရွင္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မွာေတာ့ အက်ပ္အတည္းကာလကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးရင္ Happy Ending နဲ႔ဇာတ္သိမ္းေလ့ရွိေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလုံးရဲ႕ Happy Ending က အေဝးတစ္ေနရာမွာ မႈန္ဝါးဝါး ပဲရွိေနေသးတယ္ ထင္ပါရဲ႕” ဆိုၿပီး ရင္နာစြာေရးသားခဲ့ပါတယ္။
ထပ္ၿပီးေတာ့လည္း “လူသားတိုင္း ေရေဘး မီးေ ဘး သဘာဝေဘး စစ္မက္ထူေျပာျခင္းေဘး ဆင္းရဲျခင္းေဘးမ်ားမွ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး ေရာဂါကပ္ေဘးမ်ားမွလည္း ကင္းေဝးႏိုင္ၾကပါေစ” ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ဆုေတာင္းခဲ့ပါေသး တယ္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ပင္ပင္ပန္းပန္းပိုက္ဆံသြားရွာၿပီး ျပန္လာေတာ့လည္း မိခင္ရဲ႕ေနာက္ ဆုံးအခ်ိန္ကို ေဘးမွာမရွိဘဲ Q Center ထဲမွာပဲ ေနခဲ့ရ တဲ့ညီမေလးအတြက္ စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ ပရိသတ္ႀကီးေရ…
ပရဟိတမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ဝေဠုကျော်ကတော့ လိုအပ်နေတဲ့နေရာတိုင်းကို ငွေအား ၊လူ အားနဲ့ မနှေးကူညီတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း တွေစတ င်တော့လည်း တစ်တပ်တစ်အားအနေနဲ့ အိမ်တောင်မပြန်တော့ဘဲ ဝေဘာဂီအထူး ကု ဆေးရုံနဲ့ Quarantine ဝင်မယ့်သူတွေ ကြိုပို့ရေးတို့ကို ကူညီနေသူတစ်ယောက်ပါ။
မနေ့ကတော့ ရင်နာစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်မှာထက်မှာ မျှ ဝေခဲ့ ပါတယ်။ “Covid က ဘဝတွေ၊ နှလုံးသားတွေကို တစစီ စုတ်ပြတ်သတ် သွားစေ ခဲ့ပြီ… ဒီနေ့ မိုးကသည်းသည်းမဲမဲ ရွာနေတယ်….အမေဖြစ်သူကို နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ကန် တော့ ချိန်မှာ ခုလို ပုံစံမျိုးနဲ့ မြင်ရတော့ ဘေးကလူတွေပါ ငိုကြတယ်…..
Q ဝင်နေချိန် မိခင်ဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သွား လို့ ကျတဲ့မျက်ရည်တွေက ဝတ်ထားတဲ့ PPE ထဲမှာ ပျောက်ဆုံးသွားရတယ်….မိသားစုကို ထောက်ပံ့ဖို့ နိုင်ငံခြားမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းအ လုပ် လုပ်ခဲ့ရတ ယ်… . အချိန်မီပြန်လာခဲ့ပေမယ့် Qတံတိုင်းကခြားလို့ နောက်ဆုံးအချိန် မိခင်နားမှာ မနေနိုင်ခဲ့ ဘူး။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အနေနဲ့ ဘယ်လိုအင်အားတွေနဲ့များ ရင်ဆိုင်ခဲ့တာလဲ ညီမရယ်…
ကျွန်တော် ဘဝတစ်ကွေ့မှာ ကျင်လည် ရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေတော်တော်များများ မှာတော့ အကျပ်အတည်းကာလကို ဖြတ်ကျော်ပြီးရင် Happy Ending နဲ့ဇာတ်သိမ်းလေ့ ရှိ ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ Happy Ending က အဝေးတစ်နေရာမှာ မှုန်ဝါးဝါး ပဲရှိနေသေးတယ် ထင်ပါရဲ့” ဆိုပြီး ရင်နာစွာရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ထပ်ပြီးတော့လည်း “လူသားတိုင်း ရေဘေး မီးေ ဘး သဘာဝဘေး စစ်မက်ထူပြောခြင်းဘေး ဆင်းရဲခြင်းဘေးများမှ ကျော်လွှားနိုင်ပြီး ရောဂါကပ်ဘေးများမှလည်း ကင်းဝေးနိုင်ကြ ပါစေ” ဆိုပြီးတော့လည်း ဆုတောင်းခဲ့ပါသေး တယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းပိုက်ဆံ သွား ရှာပြီး ပြန်လာတော့လည်း မိခင်ရဲ့နောက် ဆုံးအချိန်ကို ဘေးမှာမရှိဘဲ Q Center ထဲမှာပဲ နေခဲ့ရ တဲ့ညီမလေးအတွက် စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ…